Halista ku soo wajahan Soomaaliya. |
Halista ku soo wajahan Soomaaliya.
Dalka Masar(Egypt) waxuu u badan yahay dhul saxaro ah,shacabkuna badankiis waxay dagan yihiin Wabiga daafihiisa oo ay u badan yihiin dad beeralay ah.
Hadii Wabiga Niil Itoobiya(Ethiopia) xirto dhibaato badan ayaa soo gaaraysa shacabka Masaarida oo noloshooda iyo wax soo saarkooda ku tiirsanyahay biyaha Wabigaasi waxaana dowladda Masar(Egypt) ka go’an in ay qaado talaabo kasta oo ay ku joojinneyso hirgalinta biyo-xireenkaas.
Biyo-xireenkaan Itoobiya kaliya ma samaynayso ee Dowlado badan ayaa caawinaya waana barnaamij waqti dheer laga fikirayay.
Masar iyo Itoobiya xuduud ma leha oo wey kala fog yihiin, laakinse dowladda Masar waxey dooneysaa hardanka iyo dagaalka qabow ee ay Itoobiya kula jirto in ay u soo xawisho dhulka Soomaaliyeed, iyada oo ilaashaneysa kaliya danaheeda u gaarka ah, kaasoo aan aheyn mid la dhayalsan karo isuna rogi kara gacan ka hadal abuuri kara barakac, dhimasho iyo macluul hor leh oo dadka soomaaliyeed soo gaarta, waxaanse leennahay «Masareey dagaal waa ka soo daalnay, dagaal kalena maya!».
22 sano ayey dadka soomaaliyeed ku soo jireen qax joogta ah, dhaawac iyo dhimasho aan leysaga garaabeyn, gaajo iyo macluul ehel la’aaneed ee masareey markaasi maxaan kuu arki waayay? xaggeed jirtay xilligaasi?, maxaa keenay markii biyahaada la damcay in aad annaga dhibtaada nagu la soo galgalato, ma waxaad rabtaa neecaawda dowladnimo ee noo soo bidhaantay in mar kale indhaha laga duugo?
Taasi ma oggolaaneyno ee masareey walaalnimo ma diiddanin, laakin dagaal waa ka soo daalnay mid kalana maya!.
Usbuuc ka hor waxaa muqdisho ka soo degay wefdi ka koobnaa khubaro iyo jenneraallo reer masar ah oo lagu sheegay in ay wax ka qabanayaan dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, taasi haddii ay tahay caawinaad dhab ah oo loo geysanayo ciidanka soomaaliyeed ma xumo oo waa wax wanaagsan, laakinse haddii ay tahay mid la rabo in difaac looga dhigo biyaha wabiga niil, annagu ma rabno macaawimadaas.
Guud ahaan shacbi weynaha soomaaliyeed, waxaan u soo jeedinayaa in ay ku baraarugaan arrintani indho gaar ahna ku eegaan, sidoo kale dowladda, xukuumada iyo xildhibaanba, waxaan ku biirin lahaa ineysan ku kedsoomin siyaasadaha gurracan iyo danaha is diiddan ee la doonayo in lugaha loo geliyo, danta Soomaliyana ha noqoto mudnaanta kowaad.
Waxaan idiin hayaa xog run ah oo Generalo Masaari ah oo noogu yimid Villa Soomalia 1996-ki ay yirahdeen, shir ay la qaateen wasiiradii dowladdi Soomaliyeed ee xiligaas ( dowladdi Salbalaar)_ .
Waxaa qoray Mr.Omar Sheikh Adan oo ka mid aha wasiiradii dowladdi Salbalaar